फेरि जन्मनु भनेको के हो? बाइबल के भन्छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्षोसा गा गून ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ डच डेनिश तेलगु थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
फेरि जन्मनु भनेको के हो?
“फेरि जन्मनु” भन्‍ने वाक्यांशले परमेश्‍वर र कुनै व्यक्‍तिबीच नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुनुलाई बुझाउँछ। (यूहन्‍ना ३:३, ७) कसैले कुनै व्यक्‍तिलाई कानुनी रूपमा आफ्नो धर्मपुत्र बनाएपछि ऊ नयाँ परिवारको सदस्य बन्छ। (२ कोरिन्थी ६:१८) त्यस्तैगरि परमेश्‍वरले फेरि जन्मेका व्यक्‍तिहरूलाई आफ्नो सन्तानको रूपमा स्विकार्नुहुन्छ अनि तिनीहरू उहाँको परिवारको सदस्य बन्छन्‌।—रोमी ८:१५, १६; गलाती ४:५; १ यूहन्‍ना ३:१.
फेरि जन्मनु—यसको उद्देश्‍य?
येशूले यसो भन्‍नुभयो, “फेरि नजन्मेसम्म कसैले पनि परमेश्‍वरको राज्य देख्न सक्दैन।” (यूहन्‍ना ३:३) त्यसैले कुनै व्यक्‍ति फेरि जन्मेपछि मात्र परमेश्‍वरको राज्यमा येशूसँगै शासन गर्न योग्य हुन्छ। यस राज्यले स्वर्गबाट शासन गर्ने भएकोले बाइबलमा “नयाँ जन्म” हुनुलाई “स्वर्गमा साँचिएको” उत्तराधिकार पाउनु हो भनेर बताइएको छ। (१ पत्रुस १:३, ४) फेरि जन्मेकाहरूले येशूसँगै “राजाको रूपमा शासन” गर्न पाउनेछन्‌ भन्‍ने कुरामा परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई विश्‍वस्त पार्नुहुन्छ।—२ तिमोथी २:१२; २ कोरिन्थी १:२१, २२.
येशूले फेरि जन्मने व्यक्‍ति “पानी र पवित्र शक्‍तिद्वारा” जन्मनेछन्‌ भनेर बताउनुभयो। (यूहन्‍ना ३:५) यसको मतलब पानीमा बप्तिस्मा गरेपछि तिनीहरू पछि पवित्र शक्‍तिद्वारा बप्तिस्मा हुनेछन्‌।—प्रेषित १:५; २:१-४.
फेरि जन्मने पहिलो व्यक्‍ति येशू हुनुहुन्थ्यो। येशूले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा गरेपछि परमेश्‍वरले उहाँलाई पवित्र शक्‍तिद्वारा अभिषेक गर्नुभयो। यसरी परमेश्‍वरको छोराको रूपमा येशू फेरि जन्मनुभयो अनि स्वर्गमा फर्कने आशा पाउनुभयो। (मर्कूस १:९-११) परमेश्‍वरले येशूलाई अदृश्‍य व्यक्‍तिको रूपमा पुनर्जीवित गरेर त्यो आशा पूरा गर्नुभयो।—प्रेषित १३:३३.
फेरि जन्मने अरू व्यक्‍तिले पनि पवित्र शक्‍ति पाउनुअघि पानीमा बप्तिस्मा गर्छन्‌। * (प्रेषित २:३८, ४१) त्यसपछि तिनीहरूले स्वर्गमा जीवन बिताउने पक्का आशा पाउँछन्‌। परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई पुनर्जीवित गरेर त्यो आशा पूरा गर्नुहुनेछ।—१ कोरिन्थी १५:४२-४९.
‘फेरि जन्मनु’-बारे गलत धारणा
गलत धारणा: मुक्‍ति पाउन वा ख्रीष्टियन बन्‍न फेरि जन्मनै पर्छ।
तथ्य: येशूको फिरौतीले फेरि जन्मेकाहरूलाई मात्र नभई अरूलाई पनि मुक्‍ति दिन्छ। त्यसैले ख्रीष्टसित स्वर्गमा शासन गर्नेहरूले मात्र होइन, पृथ्वीमा रहने परमेश्‍वरका राज्यका प्रजाहरूले पनि मुक्‍ति पाउँछन्‌। (१ यूहन्‍ना २:१, २; प्रकाश ५:९, १०) यी प्रजाले सुन्दर बगैंचामा सधैंभरि बाँच्ने मौका पाउनेछन्‌।—भजन ३७:२९; मत्ती ६:९, १०; प्रकाश २१:१-५.
गलत धारणा: फेरि जन्मने निर्णय व्यक्‍ति आफैले गर्न सक्छ।
तथ्य: परमेश्‍वरसित सम्बन्ध गाँस्ने अनि मुक्‍ति पाउने मौका हामी सबैसित छ। (१ तिमोथी २:३, ४; याकूब ४:८) तर फेरि जन्मने निर्णय अर्थात्‌ पवित्र शक्‍तिद्वारा अभिषेक गर्ने निर्णय परमेश्‍वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलअनुसार फेरि जन्मने कुरा “न त इच्छा गर्दैमा, न दौडधूप गर्दैमा पाइन्छ तर परमेश्‍वरमा निर्भर हुन्छ।” (रोमी ९:१६) “फेरि जन्मनु” भन्‍ने वाक्यांशलाई ‘माथिबाट जन्मनु’ भनेर पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ। त्यसैले फेरि जन्मनेहरूलाई “माथिबाट” अर्थात्‌ परमेश्‍वरले नै छान्‍नुहुन्छ भनेर यसबाट स्पष्ट हुन्छ।—यूहन्‍ना ३:३, पवित्र बाइबल (TBS), फुटनोट।
^ अनु.9कर्नीलियस र तिनीसँग भएकाहरूले मात्र पानीमा बप्तिस्मा गर्नुअघि नै पवित्र शक्‍ति पाएका थिए।—प्रेषित १०:४४-४८.
कहिले र कसरी बप्तिस्मा गर्नुपर्छ? के बप्तिस्माले पाप पखाल्छ?
परमेश्‍वरको सरकार अरू सबै सरकारभन्दा किन उत्कृष्ट छ, विचार गर्नुहोस्‌।
स्वर्ग को जान्छ?
मुक्‍ति पाउनु भनेको के हो?